CAJIIB: Cristiano Ronaldo oo rikoor cusub ka dhigay Instagram-ka… (Muxuu sameeyey?) – Gool FM
Byare July 21, 2018
(Turin) 21 Luulyo 2018. Cristiano Ronaldo ayaa rikoor cusub oo dhanka Like-ta ah ka dhigay Instagram-ka, kaddib markii sawir uu soo dhigay bartiisa uu noqday kan helay like-ta ugu badan.
Kabtanka Portugal ayaa dhigay rikoor aan loo soo dhawaan oo dhinaca Instagram-ka ee dhammaan xiddigaha ciyaaraha isboortiga nooyadiisa kala duwan ah, kaddib markii sawir uu dhawaan soo dhigay uu helay Like-ta ugu badan.
CR7 ayaa todobaadkii la soo dhaafay ka tagay Real Madrid waxaana uu ku biiray Juventus, isagoo kaddibna bartiisa Instagram-ka soo dhigay sawir uu xiran yahay maaliyadda madowga iyo caddaanka ee Juve waxaana uu soo raaciyey qoraal u dhignaa “Forza Juve”.
Afar maalin kaddib Sawirkaas iyo qoraalkaas uu soo dhigay Ronaldo waxaa like saaray 11.8 milyan oo weliba sii kordhi karta, waxaana uu noqday sawirkii helay like-ta ugu badan waxa isboortiga sheegta oo dhan iyo kii shantaad ee ugu like-ta badnaa abid Instagram-ka.
Ronaldo oo shan goor ku guuleystay abaal-marinta xiddiga ugu fiican Adduunka ee Ballon d’Or ayaa heshiis afar sanadood ah u saxiixay kooxda Juventus oo kula wareegtay adduun dhan 100 milyan oo gini.
Alberto Moreno oo si weyn u amaanay olalaha cusub ee kooxda Liverpool